Vaovao - tatitra an-gazety SXY-M-SG400 Snow
Bulldozer firafitra mahazatra
Bulldozer mitondra fiandrasana avo
Fahaverezana Bulldozer SD7N LGP
Bulldozer tsy mihetsika
Tavony Buldozer SD6K LGP
Fahaverezana Bulldozer SD7K LGP
Bulldozer TS165-2 miasa-maro
Bulldozer SD7LGP multi-function
Masinina fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Fitrandrahana Rig TY370
Fitrandrahana Rig TY380T
Mpamboly manimba sy mamaha
Fitaovana ranomandry sy lanezy
Manohana ny teknolojia
Tatitra fanaovan-gazety SXY-M-SG400 Snow
Amin'izao fotoana izao, maherin'ny 50% ny toeram-pialan-tsasatra eto amin'ny firenentsika dia tsy ampy fitafiana amin'ny lanezy, ary ny ampahany betsaka amin'ny mpitaingin-droa dia manana fitaovana an-tanana, izay mampiseho fa misy tsena malalaka ho an'ny mpampiofana oram-panala. Ary ny orinasa vahiny izay mpamokatra mpiandry oram-panala dia saika ampihimamba ny tsenan'ny mpanadio lanezy manerantany. Na dia novolavolaina sy namboarina nandritra ny 6 taona aza ny fanerena oram-panala ao an-trano dia mbola banga ny vokatra avo lenta. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny orinasa HBIS Xuangong dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fampiharana ireo mpikarakara ranomandry any an-toerana mifototra amin'ny teboka avo hanombohana hahatratrarana ny fampandrosoana isan-karazany an'ny orinasa. Ny mpitrandraka oram-panala SG400 dia navotsotra soa aman-tsara tamin'ny tsenan'ny fivoriambe tamin'ny Janoary 2018, nanapaka ny haitao vahiny sy ny ampihimamba ny vidiny eo amin'ny sehatry ny oram-panala ary nameno ny banga tamin'ny vokatra an-trano mitovy amin'izany.
Ny fanamboarana fitaovana HBIS Xuangong dia nahatonga ny fandrosoana tamin'ny orinasan-dranomandry sy oram-panala. Ny famolavolana indostrialy an'ny mpandroba ny oram-panala, ny rafitra fanaraha-maso elektrika, ny rafitra fifindrana hydraulic, ary ny rafitra chassis mandeha dia nahavita endrika tsy miankina amin'ny rohy teknika manan-danja. Ilay mpitrandraka oram-panala SG400 dia mandray ny rafitry ny fifindran'ny hydrostatic voafehy elektronika. Ny angady oram-panala eo anoloana dia misy làlana mihetsika valo, ary ny angadin-dranonitra any aoriana kosa dia hetsika efatra-lalana. Ny endriny dia vita amin'ny vy tsy mahazaka maripana marobe, miaraka amin'ireo mpikaroka tsindry ambany voafaritra manokana. Ao amin'ny taxi, ny haingam-baravarankely dia mandray ny haitao fanamafisam-poatra avo roa heny, ary ny bionika fiaramanidina dia manatsara ny traikefan'ny mpamily.
Raha jerena ny tontolo iainana sy ny fotoana anaovana ny saha misy ny oram-panala, ny orinasa HBIS XuanGong koa dia nanisy fiheverana be dia be tamin'ny endrika: ny taksibe dia manana varavarankely manoloana fipoahana mahery vaika avo roa heny, ary ny fomba fanafanana no ampiasaina hiatrehana ny fepetra iasan'ny tendrombohitra avo sy ny tehezan-tendrombohitra ary ny rivotra mahery. Izy io dia miaro ny mpamily sy ny zavamaneno marina ary afaka mamaly amin'ny fomba marina sy saro-pady amin'ny tontolo maripana ambany, miantoka ny fiarovana ny asan'ny alina; ny fampiharana làlam-pamokarana vaovao vita amin'ny rubber dia tsy vitan'ny hoe mahafeno ny fepetra takiana amin'ny lanezy amin'ny lanezy, fa mampihena be ny lanjan'ny milina iray manontolo. Tamin'ny fitsapana voalohany tamin'ny toe-javatra tena izy, ny mpitrandraka oram-panala SG400 dia nahatratra ny taham-pahavitrihana 98%.
Amin'izao fotoana izao, ny mpitrandraka oram-panala SG400 dia notsapaina tamina toeram-pisakafoanana ski maromaro tany Chongli, ary namokatra "lanezy mioma" avo lenta sy maranitra. Ity mpandroba lanezy ity dia eken'ny tsena ary antenaina fa ho lasa vokatra fampiharana ho an'ny Lalao Olaimpika amin'ny 2022.
Fotoana fandefasana: Jul-02-2021
21 Dongsheng Road, Xuanhua, Provinsi Hebei 075105, PR Sina